८२ वर्षको उमेरमा स म्बन्ध वि च्छेद !
Homeबिबिध८२ वर्षको उमेरमा स म्बन्ध वि च्छेद !
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा १ सय ३८ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टेकराज गैरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतमा आएका मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन । गएको कात्तिक महिनामा मात्र १४ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए ।’-उज्यालो अनलाइन
भारत्तोलनमा सञ्जु चौधरीलाई स्वर्ण, पदक तालिकामा को–कहाँ